I-Galaxy A40: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusemthethweni | I-Androidsis
I-Galaxy A40: Uluhlu oluphakathi lwe-Samsung
Uluhlu oluphakathi lweSamsung luyaqhubeka ukwanda. Kwezi veki sele sikwazi ukwazi iimodeli ezininzi ezishiywa leli hlobo laseKorea kweli candelo. Sele sikwazi ukumazi Galaxy A70, Galaxy A30, Galaxy A20, Galaxy A50 okanye Galaxy A10. Ngoku kuza ithuba le-smartphone entsha ngaphakathi kolu sapho. Yimodeli esisele sinayo ukuvuza okuninzi ukuza kuthi ga ngoku: i-Galaxy A40.
Kwezi veki zidlulileyo bekukho ukuvuza ezahlukeneyo malunga nale Samsung Galaxy A40. Enkosi kubo, ezinye iinkcukacha zazisele zisaziwa kwifowuni, ke besele sinombono wento esinokuyilindela kuyo. Ngoku, le modeli sele inikwe ngokusemthethweni.
Nangona le modeli ingakhange ifike ngokwesiko kwimarike. Kuba nangaphambi kokuba ingeniswe ngokusesikweni, yayifakwe kwi Sele ithengisiwe kwezinye iimarike, njengeUkraine okanye iRashiya. Into enokuba nefuthe ekwenzeni oko sele inikiwe. Ngayiphi na imeko, sinedatha malunga nesixhobo.
I-Exynos 7 7904: Inkqubo entsha ye-Samsung yoluhlu oluphakathi
1 Iinkcukacha zeGalaxy A40
Iinkcukacha zeGalaxy A40
Njengoko sibonile kulo lonke uluhlu ukuza kuthi ga ngoku, i-Samsung Galaxy A40 isebenzisa a Isikrini esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Inotshi enobulumko, encinci ngobukhulu. Ukongeza, izakhelo ezifanayo ziye zancitshiswa kakhulu. Kwiikhamera, babheja kwakhona kwiikhamera ezininzi kwifowuni. Oku kukucaciswa kwayo:
IsikriniI-5,9-intshi ye-Super AMOLED enesisombululo esipheleleyo se-HD + se-2.340 × 1.080 pixels
i-ram: I-4 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-64 GB (Iyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB)
Cámara trasera: 16 + 5 MP
Ikhamera yangaphambiliI-25 MP
Ibhetri: 3.100 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
ConectividadI-4G / LTE, i-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth, iGPS, i-GLONASS
abanye: Isivamvo esingasemva somnwe
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9.0 Pie nge-UI enye
Ubukhulu: 144.3 x 69.0 x 7.9 mm
U bunzima: Iigram ezili-140
Le Samsung Galaxy A40 iboniswa njengemodeli elungileyo phakathi kuluhlu oluphakathi. Gcwalisa kancinci ngakumbi olu sapho lophawu lwaseKorea, esele ithweswe isithsaba njengolunye lwezona ndawo zinomdla kweli candelo lentengiso kwi-Android. Kule meko, isikrini sihlala nje phantsi kweesentimitha ezi-6, siyilwe kakuhle. Ke kubasebenzisi abaninzi kuya kuba lula ngakumbi ukuyibamba ifowuni ngamaxesha onke.
Njengoko sibona okuninzi kuluhlu oluphakathi, ukubheja kwefowuni kwikhamera ephindwe kabini. Ngasemva sinee-sensors ezimbini, i-16 + 5 MP. Enkosi kubo ungathatha iifoto ezilungileyo. Ukongeza, uphawu luye lwabeka ukubaluleka kwikhamera yangaphambili, ethi kule meko ibe yi-25 MP. Ibhetri ye-3.100 mAh isetyenziselwa ibhetri, edibeneyo ne-Android Pie kunye neprosesa kufuneka yanele. Inzwa yeminwe ibhalwe ngasemva kwifowuni, njengoko sibonile kulo lonke uluhlu, ngaphandle kweGalaxy A50.
Njengoko besesitshilo, le Galaxy A40 yayisele ithengisiwe kwezinye iimarike phambi kwengcaciso-ntetho yakho. Amazwe afana neRussia neUkraine aphakathi kwamazwe okuqala apho besinokubona khona ukuba ifowuni sele ikhona. Kwimeko yakho unokubona ixabiso, elikwayiyo Waye wavuza iiveki ezimbalwa ngaphambili.
Ixabiso leli banga eliphakathi li-249 euro, eza kuhlobo olunye lwe-RAM kunye nokugcinwa. Njengazo zonke iimodeli ezikolu luhlu, iphehlelelwa ngemibala emine, ekhethiweyo iblue, mnyama, coral kunye nomhlophe. Zonke zibheja kwimpembelelo ekhumbuza i-gradient, kuba xa ukukhanya kukutshayisa sinokubona umphumo onawo.
Ngokumalunga nokumiliselwa, umhla othile awunikwanga, kodwa kwiivenkile ezikwi-Intanethi apho ungayithenga ishiya i-10 ka-Epreli njengomhla wokuhanjiswa. Ke ngoko, yonke into ibonisa ukuba le Galaxy A40 iya kuthengiswa ngalo mhla eSpain. Kodwa siya kuba nedatha eninzi kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Galaxy A40: Uluhlu oluphakathi lwe-Samsung
I-Google Pixel 3a kunye ne-3a XL: oku kukukhanya okwahlukileyo kuthotho lwePixel 3
Iqinisekisiwe: Ayizukubakho ingxelo ye5G yeHuawei P30